Jacob Zuma ma laga xayuubin doonaa madaxweynenimada Koonfur Afrika? | Saxil News Network
Image captionJacob Zuma, madaxweynaha Koonfur Afrika
Image captionZuma oo baarlamaanka hadal ka jeedinaya
Sidaas darteed waxa uu xisbiga go’aansan karaa in uu eryo Mr Zuma maadaamaa loo arko in uu halis ku yahay xisbiga in uu aqlabiyada markale helo marka la gaaro doorashooyinka sanadka 2019-ka.
Go’aan kasta oo xilka looga eryayo Zuma waxaa gaaraya golaha dhexe ee xisbiga oo loo yaqaano NEC, kaas oo ah kan leh go’aanka ugu sareeya ee xisbiga.
Sida uu nidaamka u shaqeeyo, mid ka mid ah golaha dhexe ayaa soo jeedinaya in madaxweynaha xilka laga qaado, kadibna golaha oo tiradoodu dhantahay 100 ayaa u codeynaya ama go’aan wadar-ogol ah ka gaaraya mustaqbalka madaxweynaha.
Fikeni ayaa waxa uu intaas ku daray in ANC ay si fiican u garanayso Zuma in uusan ahayn nin dagaal la’aan iska taga, lagana yaabo in uu dab ku huriyo ANC haddii isaga la rido.
Image captionDad daawanaya khudbadii is casilaadda ee Thabo Mbeki sanadkii 2008-dii
“Hoggaamiyeyaasha ANC waa ay fahamsanyihiin dhibaatada uu sababi karo Zuma, xitaa waxa uu halis ku yahay doorashada 2019-ka” ayuu yiri Fikeni.
Image captionQof ka mid ah taageerayaasha ANC